Famatsiam-bola any ivelany : Manana ny fiandrianam-pirenena isika” hoy ny filoha -
AccueilRaharaham-pirenenaFamatsiam-bola any ivelany : Manana ny fiandrianam-pirenena isika” hoy ny filoha
Famatsiam-bola any ivelany : Manana ny fiandrianam-pirenena isika” hoy ny filoha
13/05/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Ny mikasika ny famatsiam-bola no nitondran’ ny filoham-pirenena fanazavana ao anatin’ny fotoam-bita voalohany izay nanazavany ny raharaha eto amin’ny firenena. Maro ireo fampiasam-bola izay efa mandeha amin’izao fotoana izao hoy ny filoham-pirenena toy ny fiarahana amin’ny vondrona eoropeanina eo amin’ny lafiny fambolena sy fanamboaran-dalana. Izany famatsiana izany no nahafahana nanamboatra ny lalana Ambanja-Diego izay lalam-pirenena faha 6, Taolagnaro –Vaingaindrano eny amin’ny lalam-pirenena faha 12 A ary ny nisy ihany koa ny ady hevitra naharitra nahafahana manao ny lalana Ambilobe- Vohemara. Noresahin’ ny filoha nandritra ity fotoam-bita omaly ity ihany koa ny famatsiam-bola maro samy hafa toy ny niarahana tamin’ny Sina sy ny banky iraisam-pirenena nosoniavina ny herinandro teo niaraka tamin’ny tahiry saodianina eo amin’ny lafiny fanamboaran-dalana ihany. Ireny lalana sy ny fambolena ireny dia anisan’ny ilana mpamatsy vola avokoa, tsy ny lalana ihany anefa fa maro ireo sehatra izay ampiasana ireny vola ireny: eo ny fambolena , ny angovo , ny fizahan-tany.
“Tsy mora ny fifampiresahana amin’ireo mpamatsy vola ireo satria dia ilana fotoana maharitra izany, hatramin’ny 18 volana na ihany koa herintaona sy tapany. Haingana kokoa anefa ny fifampiresahana amin’ ireo mpampiasa vola tsy miankina” hoy ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Ny mpampiasa vola tsy miankina no tena haingana nefa mila mahay mifandresy lahatra, satria mila antoka ny famatsiana ara-bola, mila antoka ihany koa amin’ny fandriampahalemana sy ny maro samihafa ary mila ady hevitra hapetraka.
“Mazava ny hampiasana ny famatsiana ara- bola satria entina ampiasaina hanaovana fotodrafitrasa ireny famatsiam-bola ireny ary laharam-pahamehana amin’izany ny fotodrafitrasa fototra, mijery lavitra hiarahan’ny rehetra atao no hiarahan’ny rehetra misitraka ihany koa ny vokatra amin’izany. Tsy misaraka amin’ ireny fotodrafitrasa fototra ireny ihany koa ny foto- drafitrasa ara -tsosialy, ny fanabeazana sy ny fahasalamana” hoy hatrany ny filoham-pirenena
Nazavain’ny filoha ihany koa ny mikasika ny diany tany Sina izay misy milaza fa hitady famatsiana ara- bola fanampiny na ilay hoe “financement parallèle’’ no anton-diany tany. Nambaran’ny filoha àry manoloana io resaka io fa nisy ny tsy faly tamin’ ny diany tany Sina iny, nefa dia mazava tsara ny fifanaraham-piaraha -miasa rehetra iraisam-pirenena izay natao. Ilaina anefa, hoy ny filoha, ny rehetra ahafahana mampandroso na io famatsiana avy any amin’ny firenena tavaratra na io avy any amin’ny firenena tatsimo. Noho izany dia ny mikaroka lalandava ny fomba rehetra hanasoavana ny vahoaka sy ny firenena no mampivezivezy ny filoha etsy sy eroa, fa tsy hoe fitsangatsanganana araka ny aelin’ny sasany akory
Mpamatsy vola mahazatra sy fiandrianam-pirenena
“Matoky ny mpamatsy vola mahazatra isika izay efa niara- niasa tamintsika, ary tokony hatoky antsika koa izy ireo “hoy ny filoha mikasika ireo mpamatsy vola mahazatra. “Efa nambara ombieny ombieny fa manana ny fiandrianam-pirenena i Madagasikara ary anjarantsika anatin’izany fiandrianam-pirenena izany ny miezaka mitady izay mahasoa “hoy ihany ny filoha raha niresaka ny fiandrianam-pirenena, na dia eo aza ny fitadiavana famatsiam-bola. Tsy mitambitamby amin’ ireo mpamatsy vola izay manao ilay homeko tsy homeko ihany koa ny filoha satria dia ilaina maika ny fampandrosoana, io izay antony nampiaka-peo azy tany Antsiranana nandritra ny dinika izay nokarakarain’ny vondrona eoropeanina, satria dia maika ny Malagasy amin’ny fampandrosoana
Nambaran’ny filoham-pirenena aza fa tsy ho tonga vetivety eny am-bilanin’ny malagasy isan-tokantrano izany findramam-bola izany, satria dia singa iray ihany izany ilaina amin’ny fampandrosoana tahaka ny hoe lalana ohatra. “Maro anefa ny fotodrafitrasa mameno an’ireo singa hafa mahafeno ny fepetra hahafahan’ny rehetra migoka izany fampandrosoana izany” hoy ny filoham-pirenena. Manaiky ny fimenomenoman’ny rehetra anefa ny filoham-pirenena satria amin’ izao, hoy izy, dia tafakatra hatrany amin’ ny roa arivo ariary ny kilaon’ny vidim-bary, izay foto-tsakafon’ny Malagasy ka rariny ny tabataba etsy sy eroa. Manoloana io zava- mitranga io anefa dia nazavain’ny filoha fa efa misy ny fandraisana andraikitra manoloana ity tranga ity, ary efa misy ny fivoriana izay hiarahany amin’ ireo tompon’antoka rehetra sy ny praiministra ary ny mpikambana ao amin’ny governemanta. Noho izany dia hoentin’ny filoha anatin’ny “fotoam-bita” manaraka eo indray ireo rehetra tompon’antoka sy ireo fototr’io olana io.
Betsaka ny efa vita ary mbola betsaka kosa no miandry hoy ny filoham-pirenena, bitika ihany anefa ireo zava- bita ireo satria efa lalina loatra ny fahantrana izay misy. Nambaran’ny filoha anefa fa rehefa nandray ny fitondrana ny Janoary 2014 ny tenany dia 92 isan-jato ny tahan’ny fahantrana sy ny fadiranovana teto Madagasikara io izay toromarika izay nomen’ny mpamatsy vola. Noho izany dia misy ny ezaka izay efa vitan’ny fitondram-panjakana amin’izao fotoana izao ary mbola hotohizana izany.
Fanafihana mitam-piadiana-Kalaky 02, PA 04, Makarov 01 no mbola karohina
Dimy ambin’ny folo taona aty aoriana dia mbola tsy misy tafaverina any amin’ireo mpitandro ny filaminana ireo basy very tamin’ireny fanonganam-panjakana niseho teto Madagasikara nandritra ny taona nifanesy. Kalaky roa, PA miisa efatra, Makarov iray, ...Tohiny
Noho ny fanonganam-panjakana : Tsy madio i Rajoelina
« Conférence souveraine » : Tsy hihemotra ireo kandidà
Voka-pifidianana CENI : Mivoaka androany !
Hery Rajaonarimampianina : Fifidianana ihany no vaha olan’ ny fampandrosoana